प्रोबायोटिक्स १०१: प्रोबायोटिक्स के हो र उनीहरू के गर्छन्? - कल्याण | सेप्टेम्बर 2021
औषधि जानकारी, समाचार खेलहरु चेकआउट स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण कम्पनी, समाचार समाचार समुदाय, कल्याण समुदाय प्रेस स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार औषधि बनाम मित्र घरपालुवा जनावर औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा कम्पनी, चेकआउट कल्याण
मुख्य >> कल्याण >> प्रोबायोटिक्स १०१: तिनीहरू के हुन्? र कुनचाहिँ सब भन्दा राम्रो हो?
प्रोबायोटिक्सले हालैका वर्षहरूमा लोकप्रियता प्राप्त गरिरहेको हुन सक्छ - तर विश्वास गर्नुहोस् वा नगर्नुहोस्, प्रोबायोटिक्स शुरुदेखि नै हो १ th र २० औं शताब्दी केहि फेसन वा अर्कोमा। त्यस समयमा, जीवविज्ञानीहरूले ब्याक्टेरिया र खमीरलाई किण्वन प्रक्रियामा प्रयोग गरिएको थियो र तिनीहरूलाई सकारात्मक स्वास्थ्य परिणामहरूमा जोडे।
१ 199 199 In मा, डाइटरी सप्लीमेन्ट हेल्थ एण्ड एजुकेशन ऐन (जसले डाइट्री सप्लीमेन्ट्सलाई पर्चेको औषधी भन्दा फरक तरिकाले विनियमित गर्न अनुमति दिएको थियो) संयुक्त राज्य खाद्य तथा औषधि प्रशासन (एफडीए) द्वारा लागू गरिएको थियो। यसको अर्थ पूरकहरूको लागि कम कठोर मापदण्डको अर्थ थियो prob प्रोबियटिक्स सहित। नतिजाको रूपमा, प्रोबायोटिकहरू काउन्टरमा बेच्न सकिन्छ, जसले उपभोक्ताहरूलाई सजिलैसँग उनीहरूलाई खरीद गर्नका लागि अनुमति दियो।
प्रोबायोटिक्स के हो?
प्रोबायोटिक्स हो प्रत्यक्ष सूक्ष्मजीवहरू पाचन स्वास्थ्यमा सहयोग गर्ने खमीर र ब्याक्टेरिया सहित। तिनीहरू फाइदाजनक छन् किनकि तिनीहरू पुनर्स्थापना गर्छन् र नाल फ्लोरा (वा माइक्रोबायोम) लाई सन्तुलनमा राख्छन्, जसले बारीमा सुधार गर्दछ राम्रो स्वास्थ्य । जबकि ब्याक्टेरिया वा अत्यधिक खमीरले दिमागमा संक्रमणहरू बोल्न सक्छ, तर सबै ब्याक्टेरियाहरू खराब हुँदैनन्। तपाईंसँग पेटमा राम्रो ब्याक्टेरियाको एक महत्त्वपूर्ण मात्रा छ (विशेष रूपमा आंत र पाचन तंत्रमा) जुन तपाईं स्वस्थ राख्न र खानु भएको भोजनको प्रशोधनको लागि आवश्यक छ। वास्तवमा सूक्ष्मजीवहरू जस्तै ब्याक्टेरियाले तपाईंको शरीरमा मानव कोषहरूलाई १०-१० मा पुग्दछ।
न्यूयोर्क शहरका रेजिष्टरित डायनशियन जेन्ना-एन डेल बोरेल्लो भन्छिन्, प्रोबायोटिक्स, सारमा, हाम्रो पेटको माइक्रोबायोटामा राम्रो ब्याक्टेरिया हुन्छन्। तिनीहरू धेरै किण्वित खाद्य पदार्थहरू जस्तै किम्ची, केही चीज, र दहीको साथ साथै गोली वा पाउडरको रूपमा फेला पार्न सकिन्छ।
प्रोबायोटिक्स प्रायः मानव पेटमा प्राकृतिक लाभदायक ब्याक्टेरियाहरूको नक्कल गर्न वा नक्कल गर्न प्रयास गर्दछ। प्रोबियोटिकसँग धेरै फरक ब्याक्टेरियाहरू हुन्छन् वा प्रजातिहरू हुन्छन्, प्रोबियोटिक्समा फेला परेका दुई सबैभन्दा सामान्य ब्याक्टेरिया प्रकारहरू: ल्याक्टोबसिलस र बिफिदोबक्टेरियम।
antidepressants एक औषधि परीक्षण मा देखाउनेछन्
प्रोबायोटिक उत्पादनहरूले आहार पूरकहरू वा प्राकृतिक प्रोबायोटिकहरू (जस्तै किम्ची र सौकर्कटको रूपमा किण्वित खाद्यहरू) वा फ्रिभिया दही जस्ता थपिएको प्रोबायोटिक्स सहितको खाद्य सामेल गर्दछन्। गोली वा क्याप्सुलको रूपमा, प्रोबायोटिक्स काउन्टरमा वा प्रिस्क्रिप्सनबाट किन्न सकिन्छ।
प्रोबायोटिक्स भ्रमित गर्नु हुँदैन प्रीबायोटिक्स , जुन भोजन फाइबर को एक प्रकारको पेटको मा ब्याक्टेरिया हो।
प्रोबायोटिक्सले के गर्छ?
त्यहाँ प्रोबियोटिक्सका धेरै फाइदाहरू छन्, तर विशेष रूपमा तिनीहरू जीआई स्वास्थ्य अवस्थाको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ किनकि यसले पेट र माछाको राम्रो र नराम्रो ब्याक्टेरियाहरू सन्तुलनमा राख्न सहयोग गर्दछ। प्रोबायोटिक्सले:
मा भूमिका खेल्नुहोस् केहि भिटामिनको संश्लेषण , भिटामिन बी र के सहित।
छोटो श्रृंखला फैटी एसिड उत्पादन गर्नुहोस् (एस.सी.एफ.ए.), जसले टी-सेलहरू नियमित गर्न मद्दत गर्दछ। टी-कक्षहरू प्रतिरक्षा प्रणालीलाई सुदृढ पार्छ र एन्टी-इन्फ्लेमेटरीको रूपमा कार्य गर्दछ।
लक्षण सुधार गर्नुहोस् आन्द्रा रोग (IBS), क्रोहन रोग, र अल्सरेटिव कोलाइटिसको।
मौखिक कैन्डिडिआसिस कम गर्नुहोस् र खमीर संक्रमण स्वस्थ pH शेष रकम बढाएर
मोटाई लड्ने र वजन घटाउन सुधार गर्नुहोस् (यद्यपि यस क्षेत्रमा थप अनुसन्धान आवश्यक छ)।
एक प्रकारको उपचार गर्नुहोस् पखाला र GI मुद्दाहरूको, जस्तै संक्रामक झाडापखाला, क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिल, र पाउचिटिस।
सुधार गर्नुहोस् छालाको अवस्था atopic dermatitis (एक्जिमा) जस्तै।
मद्दत नरम मल र सम्भाव्य कब्जको साथ मद्दत गर्दछ, यद्यपि तिनीहरूले आन्द्रा चालहरूको संख्या बढाउँदैन।
प्रोबियोटिक्सको प्रभावकारिताबारे धेरै अनुमान गरिएको छ किनकि त्यहाँ सीमित अनुसन्धान छ। उदाहरण को लागी, व्यवस्थित समीक्षाले सामान्य चिसो र मूत्र पथमा संक्रमण मा प्रोबियोटिक का कुनै लाभदायक प्रभाव को कम देखाइएको छ। यो किनभने प्रोबायोटिक्स धेरै किसिमका धेरै विभिन्न तानाहरूमा आउँदछ, र यो अझै देख्न सकिदैन कि यदि कुनै खास स्ट्रान्डका सबै भिन्नताहरूले समान फाइदाहरू उत्पन्न गर्दछ भने।
उदाहरण को लागी, यदि एक विशिष्ट प्रकारको ल्याक्टोबसिलस एक बिमारी लाई रोक्न मद्दत गर्दछ, यसको मतलब यो होइन कि अर्को प्रकारको ल्याक्टोबसिलसको समान प्रभाव हुन्छ। यसले अनुसन्धानलाई जटिल बनाउँदछ किनकि ब्याक्टेरियाहरूको सबै सम्भावित स्ट्रानहरू र पाचन प्रणालीलाई समर्थन गर्ने उनीहरूको प्रभावकारिताको परीक्षण गर्न गाह्रो हुन्छ।
सबै भन्दा राम्रो प्रोबायोटिक के हो?
उत्तम प्रोबायोटिक के हो भनेर भन्न गाह्रो छ किनकि प्रोबियोटिकको प्रभाव प्रत्येक व्यक्तिको लागि फरक हुन्छ। सबैजनासँग आ-आफ्नो अनौठो पेटको फ्लोरा हुन्छ, त्यसैले प्रोबायोटिक जुन तपाईंको लागि उत्तम काम गर्दछ भित्र माइक्रोबायोममा निर्भर गर्दछ तपाइँको पेट त्यहाँ सम्म छन् Species०० प्रजाति जीवाणुहरूको हाम्रो ठूलो आंतहरू भित्र फेला पर्दछ।
ईरिटेल बोवेल सिन्ड्रोम र एक्यूट डर्मेटाइटिसको उपचार गर्न चाहनेहरूको लागि सबैभन्दा धेरै प्रयोग गरिन्छ प्रोबायोटिक तनाव सामान्यतया ल्याक्टोबसिलस एसपी।, बिफिडोबेकटेरियम एसपी।, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, र Saccharomyces बुलार्डी।
समग्रमा, प्रोबायोटिक्सको सबै भन्दा लोकप्रिय र सबै भन्दा राम्रो अनुसन्धानमा समावेश: Bifidobacterium, Lactobacillus, र Saccharomyces। यो ध्यान दिनु महत्त्वपूर्ण छ कि प्राय: प्रोबायोटिक उत्पादनहरू र परिशिष्टहरूमा लाइभ ब्याक्टेरियाहरूको बहुविध प्रकार हुन्छन्।
जबकि प्रोबायोटिक सप्लीमेन्टहरू र प्रोबायोटिक फूड दुबैले स्वास्थ्य लाभहरू पाएका छन्, प्रोबायोटिक फूडहरू भेटिए बढी प्रभावकारी प्रोबायोटिक्सको वाहक। समग्रमा, कुन तनाव सबैभन्दा प्रभावकारी र केको लागि निर्धारित गर्न थप अनुसन्धान र क्लिनिकल परीक्षणहरूको आवश्यक पर्दछ।
Prob प्रोबायोटिक फूडहरू
केही खाद्य पदार्थ प्रोबियटिक्स थपेको छ, एक प्रोबायोटिक खाना एक खाना हो कि यो स्वाभाविक रूप बाट समावेश छ। यी केहि सब भन्दा स्वाभाविक प्रोबायोटिक युक्त खाना हुन्।
सायद सबै प्रोबियोटिक फूडहरूको सब भन्दा प्रख्यात, दही फर्मेन्ट डेअरी उत्पादन हो। यसले सामान्यतया ल्याक्टोबसिलस बल्गेरिकसको जीवाणु संस्कृतिहरू समावेश गर्दछ र स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस । अधिकांश दुग्ध उत्पादनहरूमा पाइने अर्को साधारण ब्याक्टेरिया बिफिडोबाक्टेरिया हो। केहि अनुसन्धान अनुमान त्यहाँ फलको साथ दही खानाहरूका अतिरिक्त स्वास्थ्य लाभहरू हुन सक्छन् जुन प्रिबायोटिक्समा उच्च हो।
केफिर, किण्वित दुध पेय, पूर्वी यूरोपबाट उत्पन्न भयो। प्रोबियोटिक्सबाट एन्टिफंगल र जीवाणुरोधी गुणहरूको रूपमा, केफिरसँग हुन सक्छ एन्ट्यासेन्सर गुणहरू । ल्याफटोज पचाउन नसक्नेहरूलाई केफिर प्राय जसो सुरक्षित हुन्छ।
Sauerkraut गोभी बाट बनेको किण्वित खाना हो, जराका साथ चौथो शताब्दी सम्म। Sauerkraut मा फेला परेको प्रोबायोटिक्स विरोधी भड़काउने हो, तर धेरै नखानु: लगातार, ठूलो मात्रामा sauerkraut पखाला को नेतृत्व ।
उत्तरी चीनमा उत्पत्ति गर्दै, कोम्बुचा किण्वित चिया उत्पादन हो। कोम्बुचा एसिटिक एसिड र ल्याक्टिक एसिड ब्याक्टेरियामा उच्च छ, र फेला पारिएको छ एन्टिमाइक्रोबियल गुणहरू । यद्यपि मानव माइक्रोबायोममा कोम्बुचाका प्रभावहरू पूर्ण रूपमा बुझ्नको लागि थप अध्ययनहरू आवश्यक छ।
कोरियाबाट जन्मिएको, किम्ची एक लोकप्रिय किण्वित बन्दकोबी र मूलीको डिश हो। किम्चीमा धेरै सहयोगी ब्याक्टेरिया हुन्छन्, जस्तै ल्याक्टोबसिलस ब्याक्टेरिया। एउटा अध्ययनले किम्चीलाई राम्रो लाग्यो पेटको स्वास्थ्य किनकि यसले विषाक्त एन्जाइम गतिविधि घटाउँछ।
Mented. फरमेन्ट सोयाबीन उत्पादनहरू
त्यहाँ विभिन्न किण्वित सोयाबीन उत्पादनहरू छन् जुन फाइदाजनक प्रोबायोटिकहरू उच्च छन्, तह, नाट्टो, र मिसो सहित। थप गरिएको बोनसको रूपमा, केहि अनुसन्धानले अनुमानित गर्दछ कि लिम्बनहरू र सोयाबीन मद्दतमा आइसोफ्लाभोनोइड्सलाई मिश्रित गर्दछ। क्यान्सर रोक्नुहोस् ।
Tra. परम्परागत छाता
परम्परागत छातामा प्रोबायोटिक्स हुन्छ। दिमागमा राख्नुहोस् यो संस्कृत छाछ भन्दा फरक छ, जुन प्राय भण्डारमा पाइन्छ र प्रोबायोटिकहरू समावेश गर्दैन। परम्परागत छातामा ल्याक्टोकोकस ल्याक्टिस हुन्छ, जसमा अद्वितीय गुणहरू हुन्छन् जुन नवजात शिशुसँग राम्रोसँग काम गर्ने भनिन्छ। एउटा अध्ययनले पत्ता दियो कि यसको गम्भीरतालाई कम गर्न मद्दत गर्‍यो नेक्रोटाइज इन्टरोकोलाइटिस (आंत मा एक संक्रमण) खरायो मा।
केहि अचारमा प्रोबायोटिक हुन्छ, तर भिनेगरले बनेको हुँदैन। त्यहाँ ब्रान्डहरू छन् जो लाइभ प्रोबायोटिक्स र रेसिपीहरू समावेश गर्दछ तपाईंको आफ्नै बनाउनका लागि। अचारले तपाईंको एन्टिआक्सिडन्टहरूको सेवन बढाउन पनि मद्दत गर्दछ।
के प्रत्येक दिन प्रोबायोटिक लिनु ठीक छ?
चूंकि प्रोबायोटिक्स सामान्यतया पूरकको रूपमा बेचिन्छ र लागूऔषध होइन, एफडीएले स्वास्थ्य दावीहरू नियमित गर्नु पर्दैन। यद्यपि अनुसन्धानले देखाउँदछ कि प्रोबायोटिक्सको दैनिक प्रयोग सुरक्षित छ।
जहाँ प्राय प्रोबियोटिकको प्रयोगसँग सम्बन्धित धेरै दुष्प्रभाव हुँदैनन्, मानिसहरू कहिलेकाहीं ब्लीफिंग / ग्यास वा आन्द्रा चालहरूमा फरक महसुस गर्न सक्दछन् जब उनीहरूले प्रोबियोटिक लिने काम सुरु गर्छन्, डेल बोररेलो भन्छन्। यो सामान्यतया समयको साथ टाढा जान्छ।
के म गर्भावस्था मा doxylamine succinate लिन सक्छु?
पूर्ण प्रभावकारिताका लागि प्रोबियोटिक्सको सहि खुराक पाउन पनि महत्त्वपूर्ण छ। प्रोबायोटिक खुराक उपनिवेश बनाउने इकाई वा CFU मा दिइन्छ। बच्चाहरूलाई एक दिन -10-१० बिलियन सीएफयू लिन सिफारिस गरिन्छ र वयस्कहरूलाई प्रति दिन १०-२० बिलियन सीएफयू लिन सिफारिस गरिन्छ।
प्रोबायोटिक्स शुरू गर्दा, यो सम्भव छ कि तपाईले शुरुको केही दिनसम्म स्टूलको विकास गर्नुहुनेछ। किनभने प्रोबायोटिक्स प्रत्यक्ष ब्याक्टेरियाहरू हुन्, पूरकमा मिति द्वारा बिक्री जाँच गर्न महत्त्वपूर्ण छ।
प्रोबियटिक्स कसले लिनु हुँदैन?
तपाईंको आहारमा पूरकहरू थप्दा स्वास्थ्यसेवा पेशेवरसँग कुरा गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। क्यान्सर र प्रतिरक्षाको कमी भएका मानिसहरूलाई प्रोबियटिक्स लिनु अघि उनीहरूको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनु विशेष गरी महत्वपूर्ण छ। अन्यथा, धेरै व्यक्तिहरू सुरक्षित रूपमा प्रोबायोटिक्स लिन सक्छन्।
कहिले सम्म फ्लू को लक्षण पछि तपाइँ tamiflu लिन सक्नुहुन्छ
कसरी वयस्कों को लागी घर मा एक कान संक्रमण को उपचार गर्न को लागी
मेलाटोनिन एक औषधि परीक्षण मा देखाउँछ
मधुमेह को लागी सामान्य रक्त शर्करा स्तर के हो